लिंगै नभएकाको कत्रो पुरुषार्थ ? :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
लिंगै नभएकाको कत्रो पुरुषार्थ ? देख्दा गठिलो जिउ, चकलेटी अनुहार साँच्ची एन्ड्रियु वार्डललाई देख्दा जो कोही तरुनी पानी पानी हुन्छन् । त्यसैले होला उनले अहिलेसम्म १ सय जना युवतीसँग ओछ्यान तताइसके । आखिर एक हट्टाकट्टा युवकले सयवटी युवतीलाई पट्यायो त के अनौठो भयो ? तर वार्डलले १ सय वटा तरुनी पटाउन सक्नु अनौठो मात्र होइन ठूलै आश्चर्य हो । किनकी वार्डलको जन्मदाखेरी नै पुरुष यौनांग अर्थात लिंग थिएन ।
लिंग नभएका पुरुषले १ सय जना महिलासँग सहबास गर्न सफल हुनु अनौठो कुरा नै मान्नुपर्छ । विचरा उनी आफ्नो लिंग नभएकाले मानसिक रुपमा पनि विक्षिप्त थिए । त्यसैले कुनैबेला उनले आत्महत्याको प्रयास पनि गरे । तर अब उनका खुसीका दिन फिर्दैछन् । सर्जरी गरेर उनमा कृत्रिम लिंग प्रत्यारोपण गरिँदैछ । कुमको मांशपेशीबाट निर्माण गरिएको कृत्रिम लिंग उनको यौनांगस्थलमा प्रत्यारोपण गरिनेछ । यो सँगै ३९ वर्षे वार्डल कृत्रिम लिंग प्रत्यारोपण गर्ने विश्वको पहिलो पुरुष बन्नेछन् ।
वंशाणुगत रोगका वार्डलमा जन्मिँदाखेरी नै लिंग थिएन । उनका अण्डकोष भएपनि लिंग थिएन । बेलायतको वेल्समा एक कुमारी आमाबाट जन्मिएका वार्डलको अवस्था देखेपछि त्यसबेला सत्र वर्षकी मात्र रहेकी उनकी आमा आत्तिइन् । भाग्यवस एक निसन्तान दम्पतीले वार्डललाई धर्मपुत्र बनाउनका लागि अपनाए । अहिले वार्डल ३९ वर्षका भैसकेका छन् । बधाइ छ, पुरुषार्थ पाउन थालेका वार्डललाई ।
2 Comments on “लिंगै नभएकाको कत्रो पुरुषार्थ ?”
Ismi kaji wrote on 20 March, 2013, 11:31
Dhanya chha bigyan ko chamatkaar lai!!
Ankha Karki wrote on 22 March, 2013, 8:58
kastho aachama ho mancha ko janma bhaya pachi ke hudhina ra bhaneko ho